Akụkọ - Akara ejiji ndị Korea “RE; CODE”, uwe megharịrị emegharị nwere ike ịcha mma
N'ala & Leggings
Tankị & Vests
Enweghị nsogbu Top
Enweghị nsogbu Set
Akwa akwa egwuregwu emegharịrị
Ihe eji eme akwa Fiber
Ụkpụrụ Egwuregwu Na -adịgide Adịgide
Eco enyi na enyi
ECHICHE & SEW Ejiji
EGO adịghị mma
SGS akwa akwa
Akara ejiji Korea “RE; CODE”, uwe megharịrị emegharị nwere ike bụrụ nke ejiji
Mgbe anyị na -ekwu maka uwe nkwado, anyị na -ekwukarị maka ya ihe eji eme gburugburu ebe obibi, ọmụmaatụ, akwa acharaeco friendly, sorona plant based fabric ma rụgharịa akwa karama arụgharịrị arụgharị. Taa, anyị ga -enyocha ihe dị iche. Ụfọdụ ụzọ na -eme nke ọma iji nyere ụwa aka karịaakwa eco -friendly kacha mma.
Akara ejiji Korea “RE; CODE” na -akwado echiche nke ibelata mkpofu uwe na inye uwe ọhụrụ ndụ. Site na nkwado nke ndị nrụpụta ọkachamara na ndị na -akwa akwa, ọ na -ewetara anyị ọhụụ ọhụrụ nke akwa eji arụgharị arụgharị.
ịdịcha mma, na ịkwa akwa, na nlele mbụ, ị ga-eche maka ụdị onye nrụpụta ihe mara mma, na nyocha ọzọ, ọ ga-eju gị anya ịhụ anya na nka nke onye nrụpụta.
Na 2012, iji gwupụta ngwa ahịa a na-enweghị ike ire ere, akara ama egwuregwu ama ama ama ama ama na Korea "Kolon" achọghị imebi ebuka site na nsure ọkụ ọdịnala, yabụ RE: CODE guzobere.
Laa azụ n'oge ahụ, Kolon nwere ngwa ahịa na -enweghị ike ị nweta puku ijeri 1.5 meriri. RE; CODE mụrụ ọrụ siri ike. Ebumnuche ya bụ ịhazigharị ma nye ngwaahịa ọhụrụ nke isi ụlọ ọrụ nke na -eche ihu nsure ọkụ ọkụ.
Yabụ kedu ihe RE: CODE na -eme?
Dị iche na iji akwa enyi na ala, RE: CODE kere Igbe Atelier, nke na -enye ndị nkịtị ohere ịhazi uwe ha na ụlọ ahịa wee nye ọrụ atọ gụnyere "RE: Mkpokọta", "RE: Ụdị" na "RE: Pair".
ọ bụ naanị ndị mmadụ kwesịrị iweta uwe ochie, a ga-enwe ndị nrụpụta ọkachamara na ndị na-akwa akwa ka ha kpaa maka ịkwa akwa ka hazigharịa uwe ochie n'ime uwe ọhụrụ dị iche kpamkpam. Mgbe emechara uwe ahụ, ika ahụ ga -edekọ akụkọ uwe, nkọwa nha, usoro nrụzigharị na nkọwa ndị ọzọ, wee dụnye akara nwere okwu “1 ″ na ya, na -anọchite anya otu akwa pụrụ iche n'ụwa.
ọ na -enye nhọrọ ndị ọzọ karịa uwe. Ndị mmadụ na -ewetara uwe omumu ihe n'ọgbakọ. Onye nrụpụta ahụ ga -atụpụta atụmatụ nrụzigharị ise, nke enwere ike idozigharị ya na akwa mkpuchi, mkpuchi, akpa na ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụ ịgbasawanye ohere nke uwe.
RE: Mmakọ bụ imezi akwa, ka ndụ akwa ga -agbatị, ncheta anyị ga -adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Taa, ka ụlọ ọrụ ejiji zuru ụwa ọnụ na -etinyekwu nlebara anya n'okwu ndị na -adigide, ọ dị mkpa ibelata mkpofu uwe.
Ịmepụtaghị uwe ọzọ nwere ike ịbụ ụzọ kacha mma iji wepụ ihe mkpofu.
Edeziri ya onye na -emepụta yoga, FitFever.
Ime ụlọ 703 Hualiyun Park Wuchang, mpaghara Yuhang, Hangzhou China